Onyinye PATA Gold: Akụkọ Ochie Dị Ndụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Awards » Onyinye PATA Gold: Akụkọ Ochie Dị Ndụ
Awards • Na-agbasa News Travel • Akụkọ mgbasa ozi Macau • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • Ịrụ ọrụ • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Na PATA Travel Mart 2017 a, ama ama ngosi Bangkok a ma ama, Muay Thai Live: Ndụ ndị a na-akọ akụkọ ahụ meriri PATA Gold Awards 2017 a ma ama - na ngalaba ọdịnala (ọdịnala ọdịnala na nka a na-ahụ anya).
Nke a bụ mmeri PATA Gold Award mbụ maka Muay Thai Live: Akụkọ Ochie, bụ onye ndị ‘Choice Awards’ nke ndị ‘Choice Awards’ gosipụtagoro bụ ‘Ihe Kachasị Mma’ nke ndị njem China họpụtara na 2015, 2016 na 2017, na Akwụkwọ Nleta kacha mma nke TripAdvisor. , kwa afọ atọ n'ahịrị.
Nata nkwanye ugwu na mmemme oriri na ọ wasụ wasụ bụ Mrs Viwan Karnasut, onye isi nchịkwa Muay Thai Live: Akụkọ Akụkọ Ochie. “PATA n’onwe ya bụ nzukọ a ma ama na-akwanyere ùgwù n’ụwa nile. N'ihi ya, a na-ahụta ihe nrite ahụ dị ka ihe dị ùgwù ma bụrụ akara nke kacha mma maka onye nata - ọ bụrụ n'ụdị ọ bụla. Maka Muay Thai Live: Akụkọ Ochie, na-emeri PATA Gold Award bụ ihe dị otu a na nnukwu akara ngosi maka ngosi na ụlọ ọrụ anyị, yana nnukwu nsọpụrụ maka obodo anyị. Ebumnuche anyị imepụta ihe nkiri ahụ site na mbido bụ iji gbasaa mmata banyere ọdịbendị na ihe nketa nke mba a, yana egwuregwu mba anyị bụ Muay Thai. Anyị hụrụ na ọ na-atụnye ụtụ dị ukwuu n'ịkọ akụkọ akụkọ Thailand na mpaghara ịgba ọgụ. Anyị chọrọ ka a mara ya n'ụwa niile na maka ndị mmadụ na-aga Thailand. "
Ndi otu ndi okacha amara nke mba uwa hoputara ndi meriri na nturu ugo a, ndi n’aduputa ndi otu n’otu na ndi mmadu n’otu n’otu maka oru oma ndi njem na njem nleta na mpaghara Asia-Pacific. Ndị mmeri nke PATA Grand na Gold Awards 2017 setịpụrụ ụkpụrụ ụlọ ọrụ maka ịdị mma na ihe ọhụrụ.
Afọ a dọtara ntinye 220 sitere na nzukọ 77 na ndị mmadụ n'otu n'otu n'ụwa niile. A na-akwado mmemme onyinye a ma kwado ya kemgbe 1995 site na Macao Government Tourism Office, ma na-ewere ọnọdụ na Macau na Fraịde, Septemba 15, 2017, n'oge PATA Travel Mart 2017.